Cajiibka: Ka saarida macluumaadka Webka oo la dheereynayo
Bilawga cusub, farsamooyinka shabakadda farsamaynta ayaa badanaa diiradda saaraya saaridda macluumaadka aan nidaamsaneyn iyo midka-qaabaysan ee bogagga shabakadaha iyo goobaha xogta qaabaysan ee dambe ee lagu keydiyo macaashka macaamilka Excel iyo database. Maalmahan, xoqitaanku waa hawl aad u-shaqeysiineyso, oo aad uga mahadcelisay Google. Iyada oo la dheellitirayo shabakadaynta shabakada, xoqitaanka webku waa guji furan.
Xogta aan la cayimin ayaa inta badan lagu heli karaa qaabka HTML. Si aad xogta uga hesho boggaga foomamka fudud, waa inaad sameysid jarista. Haddii codeyntu aysan ahayn dantaada, dheellitirka shabakada bogga waxaa loogu talagalay in lagu daboolo baahida saarida macluumaadkaaga webka.
Dhiirrigelinta shabakadda ayaa ka dhigaysa macluumaad faa'iido leh oo laga helo dukaamada internetka sida sawirrada, qiimaha badeecada, iyo sharaxaadda. Macluumaadka waxaa isticmaala milkiilayaasha ganacsiga ee isbarbar dhiga qiimaha iyo falanqaynta xogta. Xoqitaanka ayaa sidoo kale loo isticmaalaa hay'adaha safarada internetka. Iyada oo la dheereeyey fidinta shabakadda, waxaad si sahlan u soo saari kartaa sawirrada iyo qiimaha badeecadaha laga helo meelo badan oo xogta lagu kaydiyo xogta xogta xogta xogta.
Maareynta Shahaadada Online
Macluumaadka noocan ah ee ku yaal bogagaaga Excel, waxaad go'aamin kartaa meelaha ay saameyn ku yeelan karto kor u qaadidaada
Qaadashada isbeddelka bogga iyo qiimayaasha Spam
Websaydhku waxay isbeddelaan habeenkii, sidaas darteed waa lagama maarmaan in la xusuusto isbeddelka isbedelka waqtiga dhabta ah iyo fulinta istaraatiijiyooyin wax ku ool ah helitaanka xogta waxtarka leh Tani waa meesha kor u qaadidda shabaqaha ee webka ku yimaada. Iyada oo la kordhinayo falanqaynta, waxaad ku ogaan kartaa isbeddelka isbeddelka bogga iyo dib u eegista khayaanada ee ujeedada ah in la marin habaabiyo dadka isticmaala.
Maxay Web Wareerka
Web Gawracatadu waa sho ugu sarreeya plugin wser kaas oo bixiya adeegyada ka saarista xogta iyo kordhinta Google Chrome lacag la'aan. Xogta laga soo qaado Web Scraper waxaa lagu soo daabacay qaabka faylka CSV kadibna lagu kaydiyaa CouchDB. Dhaqdhaqaaqa shabakada ah sida kaydinta macluumaadka, dhoofinta, iyo dhisidda bogga internetka waxaa lagu sameeyaa shabakada internetka ee Chrome.
Maxay tahay Xawaaraynta Webka?
Web Scraper waa fiilo ama dheereyn lagu bixiyay bilaashka dukaanka Google. Iyada oo kordhintaan, waxaad soo saari kartaa macluumaad faa'iido leh oo laga heli karo bogagga shabakadaha sare. Xogta laga soo xigtay isticmaalka dheeraadka ah ee kaydinta webka ayaa lagu kaydin karaa faylka CSV ama CouchDB. Kordhinta Tani waxay ka dhex shaqeysaa bogaga ka socda ereyga. Isticmaal ahaan, waxaad go'aan ka gaartaa waxa la soo saaro iyo waxa laga baxayo.
Si aad u rakibtid bogga Wareegtada, booqo dukaanka Google iyo ku dar kordhinta Chrome. U ogolow kordhinta sawirada webka inay kaa dhumiyaan. Fidinta waxay ku socotaa oo ay soo saartaa xogta iyadoo loo eegayo bogaga muraayada oo lagu dhiso user user dhamaadka Source .